Imidlalo yangaphandle yabantwana ngaphandle kwemathiriyeli | Oomama Namhlanje
Imidlalo yangaphandle yabantwana ngaphandle kwemathiriyeli
UToñy Torres | | Ukuzonwabisa
Imidlalo yangaphandle ayonwabisi nje kuphela, zisempilweni kwaye ziyimfuneko ebantwaneni. Nawuphi na umsebenzi obavumela ukuba baphefumle umoya ococekileyo uya kubaluleka kwaye ubaluleke kakhulu empilweni yabo. Ukongeza, ukungasebenzisi naluphi na uhlobo lwezinto ngaphandle kwengcinga yakho, iya kuba yindlela elungileyo yokuphucula ubuchule bakho. Abantwana kufuneka bafunde ukuba nawuphi na umdlalo kunokwenzeka ngaphandle kokuba nezinto ezininzi.
Kumashumi ambalwa eminyaka eyadlulayo, abantwana babekwazi dlala esitratweni iiyure ezininzi kungekho nasinye isixhobo ngaphandle kwezinto abanokuzifumana esitratweni. Kunye, ukusebenza ngobuchule babo kunye nokuxhobisa zonke iingcinga zabo, babenakho ukwenza zonke iintlobo zemidlalo abaye bakwazi ukutyhubela iminyaka kwaye bafikelela namhlanje. Leyo yimidlalo abantwana banamhlanje ekufuneka bayazi.
1 Imidlalo yangaphandle yabantwana
1.1 Umdlalo weetshefu
1.2 Iikona ezine
1.3 Ifowuni eyaphukileyo
1.4 IsiNgesi Hideaway
Imidlalo yangaphandle yabantwana
Ukudlala ngaphandle kuthetha inkululeko yokuhamba, indawo apho ungabaleka kwaye udlale imidlalo kwindawo evaliweyo kunokuba nzima ukwenza. Kukho imidlalo engenakubalwa esele yenziwe, kodwa abantwana badinga okuncinci kakhulu ekuyileni nasekudaleni imidlalo emitsha. Bayeke bazame kwaye babhale phantsi yonke into ethi qatha engqondweni, baya kuza nezimvo ezintle.
Le yeminye yemidlalo yangaphandle yesiko kumnandi ngakumbi kunye nabantwana.
Ufuna kuphela isikhafu okanye isambatho esikhanyayo ukusebenzela loo njongo. Umntu kufuneka indawo kwindawo ephakathi ephakathi ephethe itshefu. Ukusuka apho kukho itshefu, umgama olinganayo kufuneka wenziwe kumacala omabini apho abantwana baya kubekwa khona njengamaqela. Iqela ngalinye kufuneka libe nenani elifanayo labathathi-nxaxheba kwaye umntwana ngamnye uya kunikwa inani. Xa wonke umntu ekulungele, umntu ophethe itshefu uyakubiza inombolo kwaye abantwana abanelo nani baya kubaleka bayokuthatha itshefu. Ophumeleleyo ngumntwana oyicholayo kuqala kunye neqela elichola itshefu amaxesha amaninzi kuqala.
Kulo mdlalo ufuna abadlali aba-5, abane abaza kuba ngabo babekwe ezimbombeni kwaye omnye uya kuba ubekwe embindini. Into yomdlalo yile abantwana abakwiikona kufuneka batyhalele kwelandelayo kwikona, lowo uphakathi makazame ukuba ikona yasimahla ngaphambi kokuba abanye abathathi-nxaxheba bafike. Xa lowo uphakathi ekwaziyo ukuba ikona, lowo uphume kuyo uyakuba seziko kwaye ngoku nguye ekufuneka azame ukufumana ikona yasimahla.
Lo mdlalo ugqibelele xa ubuncinci abantwana be-4, kodwa abathathi-nxaxheba baya kuba mnandi ngakumbi kumdlalo. Umdlalo uqala ngolu hlobo lulandelayo, umntwana uhlebela lo usecaleni kwakhe naliphi na ibinzana endlebeni yakhe, eyenziweyo. Ngoku, kufuneka athethe eli binzana endlebeni yakhe, ngokukhawuleza okukhulu. Bonke abantwana kufuneka benze okufanayo ngokutshintshana, uya kubona ukuba xa eli binzana lifikelela kumntwana wokuqala owaliqambayo, liya kuba litshintshile kangangokuba alizukufana nalo.
Umntwana ngulo uhlala kwindawo kunye nalowo uphawula umdlalo. Kumgama ophakathi abanye abantwana babekwe. Le isentloko kunye nomqolo wakhe kuye wonke umntu kunyanzelekile Phinda la mabinzana alandelayo "fihla uze ufune isiNgesi ngaphandle kokuhambisa izandla okanye iinyawo" ujike ngokubhekisele kwabanye abantwana ngelo xesha. Abanye abantwana kufuneka baye ngasentloko ngelixa umntwana ephindaphinda elo binzana, kodwa xa egqibile, kufuneka bahlale behleli kwindawo abakuyo ngalo mzuzu.
Owokuqala ukufikelela kumgca wokugqibela uphumelela umdlalo.okanye kwaye ukuba lowo usentlokweni uphinda ibinzana elisuka kwindawo yokufihla yesiNgesi abone omnye wabantwana eshukuma, lowo ushukumayo uyakulahleka. Oku kuyakufuneka kubekwe kwinjongo kwaye ngoku iya kuba ngulowo uzama ukubamba abanye bephuma ngaphandle kwexesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » Ukuzonwabisa » Imidlalo yangaphandle yabantwana ngaphandle kwemathiriyeli
Ungazithatha njani iifoto zentsana yoqobo
Zeziphi izinto ezikrelekrele zamandulo